Atletico Madrid Oo Jawaab Bixisay Ka Dib Marki Uu Garsoore Clattenburg Qirtay In Goolkii Real Madrid Ee Finalkii Champions League Uu Offside Ahaa - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Atletico Madrid Oo Jawaab Bixisay Ka Dib Marki Uu Garsoore Clattenburg Qirtay...
Meesha ugu sareysa ee uu garsoore gaari karo waa in loo dhiibo finalada ugu waa weyn kubada cagta dunida.
Inaad garsoore ka noqoto finalka Koobka Adduunka ama finalka Champions League waa halka ugu fiican ee uu garsoore gaari karo.
Nasiibdarro garsooraha Ingariiska Mark Clattenburg markii uu dhexdhexaadiye ka noqday kulankii finalka Champions League ee u dhaxeeyay Real Madrid iyo Atletico Madrid sannadkii 2016, waxa uu sameeyay qalad aad u weyn.
Real Madrid ayaa hogaanka qabatay ka dib 15 daqiiqo oo ay ciyaarta socotay laakiin maqaal uu Clattenburg ku qoray wargeyska Dialy Mail ayaa ku qirtay in goolkaas uu qalad ahaa.
“Finalkii Real Madrid waxay ciyaarta ku qabatay 1-0 qeybtii hore laakiin goolka waxa uu ahaa offside, waxaana ogaanay waqtigii nasashada” ayuu yiri Clattenburg. “Waxay aheyd go’aan adag, caawiyaheyga ayaana seegay
“Waxaan siiyay Atletico rigoore bilowgii qeybta labaad markii uu Pepe qalad ku galay Fernando Torres.” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Pepe aad ayuu u careysnaa wuxuuna igu yiri isagoo ingariis fiican ku hadlaya” ‘Mark, Marnaba ma aysan aheyn rigoore.’
“Waxaan ku iri: ‘Goolkiinii hore ma aheyn isna in la ogolaado’ waan ku aamusiyay.”
Ka dib qirashada Clattenburg ee inuu Real Madrid u ogolaaday gool offfside ahaa, Atletico ayaa jawaab ku soo qortay Twitter.
Previous articleQaramada Midoobay”24 qof ayaa ku dhintay daadadka Soomaaliya”
Next articleFlooding in Somalia raises concern about cholera in the midst of the COVID-19 outbreak